Cali Cabdulaahi Cosoble oo sheegtay inuu yahay Madaxweynaha Hiiranland – XAMAR POST
By Mohamed Ahmed Last updated Sep 2, 2017
Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa maanta magaalada Beledweyne waxaa ay qaar kamid ah maamulka gobolka Hiiraan iyo oday dhaqameedyo ay ugu doorteen inuu yahay Madaxweynaha Maamul la magac baxay Hiiraanland.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Aadan Ibraahim ayaa kulan lagu qabtay Beledweyne ka sheegay in xildhibaanada Hirshabelle ay burburiyeen nidaamkii hore loogu heshiiyay iyo dastuurkii Hirshabelle.
Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cumar Baadiyow ayaa ku eedeeyay dowlada federalka inay ku xadgudubtay dastuurka dalk u yaal, sidaa darted ay Cali Cabdulaahi Cosoble u doorteen inuu yahay Madaxweynaha Hiiranland.
Inkastoo uusan Cali Cabdulaahi Cosoble madasha loogaga dhowaaqay inuu yahay Madaxweynaha Hiiranland uusan ka hadlin balse saxafiyiintii ku sugneyd goobtaas ayuu u sheegay inuu raali ka yahay in uu xilkan qabto.
Illaa iyo hadda ma aqbalin Cali Cabdulaahi Cosoble sharcinimada xilka qaadis ay ku sameeyeen 14kii bishii hore xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle,waxana markii uu tegey magaalada Beledweyne dhowaan sheegay inuu yahay Madaxweynaha sharciga ah ee Hirshabelle uuna ku shaqeynayo magaalada Beledweyne.